Displaying 55921 - 55930 of 82079
ရခိုင် မြောက်ပိုင်း သံတမန်ခရီးစဉ် ကြေညာချက် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မောင်းတောနှင့် ရသေ့တောင် ဒေသများရှိ ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဒေသခံ မျိုးစုံနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ARSA ၏ တိုက်ခိုက်မှုများအား ရှုတ်ချကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားအပ်ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် လူမြောက်များစွာ နေရပ်စွန့်ခွာမှု များကို လည်း ကျွန်ုပ်တို့  အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။ ယခုခရီးစဉ်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ခရီးစဉ် မဟုတ်သလို ထိုသို့ စစုံမ်းစစ်ဆေးရန်လည်း အခြေအနေ မပေးပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စွပ်စွဲချက်များအား စုံစမ်းရန်မှာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
Read more about Mogherini addresses the conference "Hybrid threats and the EU: State of play and future progress"
Выступление Верховного Представителя ЕС Федерики Могерини на конференции «Гибридные угрозы и ЕС - положение дел и будущий прогресс»
Выступление Верховного Представителя ЕС Федерики Могерини на конференции ««Гибридные угрозы и ЕС - положение дел и будущий прогресс»
Global Call for proposals on Human Rights and Democracy has been launched!
The European Union has launchedanew Call for proposals financed under the European Instrument for Democracy and Human Rights.
Объявлен всемирный конкурс заявок "Права человека и демократия"!
Европейский союз объявил о проведении нового конкурса заявок в рамках функционирования Европейского инструмента демократии и прав человека.
Абвешчаны сусветны конкурс заявак "Правы чалавека і дэмакратыя"!
Еўрапейскі саюз абвясціў аб правядзенні новага конкурсу заявак у рамках функцыянавання Еўрапейскага інструмента дэмакратыі і правоў чалавека.
Statement by Ambassadors and High Commissioners as delivered earlier today at the Bomas of Kenya
Read more about Statement by Ambassadors and High Commissioners to Kenya In Advance of the New Presidential Election